Wordplanet: Abtirsiinyada Ciise; Dhalashadii Ciise. - MATAYOS - Kitaabka Quduuska Ah - Axdiga Cusub
MATAYOS - Cutub 1
MATAYOS - Cutub 3
MATAYOS - Cutub 4
23 Ciise ayaa Galili oo dhan ku wareegay, isagoo
MATAYOS - Cutub 5
1Markuu dadkii badnaa arkay ayuu buur fuulay, markaasuu fadhiistay oo xertiisa ayaa u timid.
MATAYOS - Cutub 6
MATAYOS - Cutub 7
1Ninna ha xukumina inaan laydin xukumin.
MATAYOS - Cutub 8
1Goortuu buurta ka soo degay, dad badan baa soo raacay.
MATAYOS - Cutub 9
27 Ciise intuu meeshaas ka tegayay, waxaa daba socday laba nin oo Indhala, iyagoo qaylinaya oo leh, Ina Daa'uudow, noo naxariiso.
32 Kolkay baxeen, bal eeg, waxaa loo keenay nin Carrabla oo jinni qaba.
MATAYOS - Cutub 10
1Markaasuu wuxuu u yeedhay laba-iyo-tobankii xertiisa ahaa oo wuxuu siiyey amar ay jinniyo wasakh leh ku saaraan oo ay bugto walba iyo cudur walba ku bogsiiyaan.
MATAYOS - Cutub 12
MATAYOS - Cutub 14
1Waagaas taliye Herodos ayaa warkii Ciise maqlay,
MATAYOS - Cutub 16
1Waxaa u yimid Farrisiintii iyo Sadukiintii iyagoo jirrabaya, oo waxay ka baryeen inuu calaamo cirka ka tuso.
MATAYOS - Cutub 18
MATAYOS - Cutub 19
1Waxaa dhacay in, goortuu Ciise hadalladan dhammeeyey, uu Galili ka tegey, oo wuxuu yimid soohdimaha Yahuudiya, oo Webi Urdun ka shisheeya.
MATAYOS - Cutub 20
MATAYOS - Cutub 21
1Goortay Yeruusaalem ku soo dhowaadeen oo ay Beytfaage galeen ilaa Buur Saytuun, markaasaa Ciise laba xer ah diray,
MATAYOS - Cutub 22
1Ciise ayaa u jawaabay oo mar kale masaallo kula hadlay, oo wuxuu yidhi,
MATAYOS - Cutub 23
1Dabadeed Ciise ayaa dadkii badnaa iyo xertiisii la hadlay,
2 oo wuxuu ku yidhi, Culimada iyo Farrisiinta waxay ku fadhiistaan kursiga Muuse.
5 laakiin shuqulkooda oo dhan waxay u sameeyaan in dadku arko. waayo, xirsiyadooda way ballaadhiyaan, oo faraqa dharkoodana way weyneeyaan;
6 waxay jecel yihiin meelaha hore oo diyaafadaha. iyo kursiyada hore oo sunagogyada,
8 laakiin yaan laydiinku yeedhin, Macallin. waayo, mid baa macallinkiinna ah, idinkuna kulli walaalo baad tihiin.
9 Ninna dhulka ha ugu yeedhina aabbe, waayo. mid baa Aabbihiin ah, kaasu waa kan jannada ku jira.
11 laakiin kan idiinku weyn waa inuu ahaado midiidinkiinna.
12 Oo ku alla kii isa sarraysiiya waa la hoosaysiin doonaa, oo ku alla kii is hoosaysiiyana waa la sarraysiin doonaa.
13 laakiin waa idiin hoog, culimo iyo Farrisiin yahay oo laba-wejiilayaasha ahu, waayo, boqortooyada jannada ayaad dadka ka xidhaan, maxaa yeelay, idinku ma gashaan, oo kuwa gelayana uma deysaan inay galaan.
14 Waa idiin hoog, culimo iyo Farrisiin yahay, laba-wejiilayaasha ahu, waayo, waxaad laasataan guryaha carmallada, oo tukashooyin dhaadheer ayaad istusid u tukataan, sidaa darteed waxaad heli doontaan xisaab aad u daran.
15 Waa idiin hoog, culimo iyo Farrisiin yahay. laba-wejiilayaasha ahu, waayo, badda iyo dhulka waxaad u wareegtaan inaad mid soo hadaysaan, oo kolkuu sidaas noqdo, waxaad ka dhigtaan wiilka jahannamada laba kol in idinka badan idinka.
17 Doqonno yahow indhaha la'u, kee baa weyn, dahabka iyo macbudka dahabka qoduus ka dhiga?
18 Oo weliba waxaad leedahay, Ku alla kii meesha allabariga ku dhaarta waxba ma aha, laakiin ku alla kii ku dhaarta hadiyadda dul saaran, wuxuu ku dhaartay waa lagu leeyahay.
19 Indhoolayaal yahow, haddaba kee baa weyn, hadiyadda iyo meesha allabariga oo hadiyadda qoduus ka dhigta?
22 Oo kii jannada ku dhaartaana wuxuu ku dhaartaa carshiga Ilaah iyo kan ku dul fadhiyaba.
23 Waa idiin hoog, culimo iyo Farrisiin yahay, laba-wejiilayaasha ahu, waayo, rexaanta iyo kabsarta iyo kamuunta toban meelood ayaad meel ka bixisaan, oo waxaad dhaafteen wixii sharciga ugu cuslaa, waxaa weeye xukunka iyo naxariista iyo iimaanka. Waxaad lahaydeen inaad waxan samaysaan oo aydnaan kuwa kale dhaafin.
25 Waa idiin hoog, culimo iyo Farrisiin yahay, laba-wejiilayaasha ahu, waayo, koobka iyo saxanka dushaad ka nadiifisaan, laakiin gudaha waxaa ka buuxa dulun iyo damacbadnaan.
27 Waa idiin hoog, culimo iyo Farrisiin yahay, laba-wejiilayaasha ahu, waayo, waxaad u eg tihiin xabaalo la caddeeyey, kuwa dushoodu u eg tahay wax qurxoon, laakiin hoosta waxaa ka buuxa lafo dad dhintay iyo wasakh oo dhan.
28 Sidaas oo kalena idinku dusha waxaad dadka ugu eg tihiin dad xaq ah, laakiin gudaha waxaa idinka buuxa laba-wejiilenimo iyo dembi.
29 Waa idiin hoog, culimo iyo Farrisiin yahay, laba-wejiilayaasha ahu, waayo, waxaad dhistaan xabaalaha nebiyada, oo waxaad qurxisaan qabriyada kuwii xaqa ahaa;
30 oo waxaad tidhaahdaan, Haddii aannu waagii awowayaashayo joogi lahayn, annagu kala ma aannaan qayb galneen kuwii dhiigga nebiyada qabay.
34 Sidaa darteed, waxaan idiin soo dirayaa nebiyo iyo kuwa xigmadda leh iyo culimo. Qaarkood waad dili doontaan oo iskutallaabta ku qodbi doontaan, qaarkoodna sunagogyadiinna ayaad ku karbaashi doontaan, oo magaalo ilaa magaalo ayaad ku silcin doontaan,
35 inuu dushiinna ku soo dego dhiiggii xaqa ahaa oo dhulka ku daatay oo dhan oo laga bilaabo dhiigga Haabiil kii xaqa ahaa ilaa dhiigga Sakariyas ina Barakiyas kan aad ku disheen meesha qoduuska ah iyo meeshii allabariga dhexdooda.
39 Waayo, waxaan idinku leeyahay, Ima arki doontaan hadda dabadeed ilaa aad tidhaahdaan, Waxaa barakadaysan kan Rabbiga magiciisa ku imanaya.
MATAYOS - Cutub 24
1Ciise ayaa macbudka ka baxay, oo intuu tegayay ayaa xertiisii u timid inay tusaan dhismaha macbudka.
MATAYOS - Cutub 25
MATAYOS - Cutub 26
MATAYOS - Cutub 28